No-Mind | ZAYYA
← မျှော်လင့်ချက် တကယ် မဲ့ သလား
ပညာ နှင့် အရွယ်: ပါရဂူ →
ဒါ့ကြောင့် – No-Mind ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဟာ – ဘာဝနာရဲ့ အဆုံးမှာ – ခင်ဗျား စိတ်ကို ခင်ဗျား ကောင်းကောင်း နိုင်နင်း တယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ လိုအပ်ချိန်မှာ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင် တယ်။ သူက အရှင်သခင် အနေနဲ့သာ ဆိုးသွမ်းနေတာ သက်သက်။ ခင်ဗျား နိုင်နင်း တဲ့ အခါ သေဝပ် တဲ့ ကျွန်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အခုပဲ ခင်ဗျား – မိမိ စိတ်ကို မိမိ နိုင်နင်းပြီ ~ No-mind ရဲ့ အဖြစ်ကို သိပြီ ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျား တစ်ဦးတည်း ငြိမ်ဝပ်နေချိန် မှာ သူ ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက် နိုင်တော့ဘူးပဲ – ငြိမ်ဝပ်မှု အပြည့်၊ ချမ်းမြေ့မှု အပြည့် ရှိတယ်။ ခင်ဗျား ငြိမ်ဝပ်ရင် ငြိမ်ဝပ်တဲ့ အတိုင်း ရှိတယ်။ လိုအပ်လာပြီ ဆိုတဲ့ အခါ – ခင်ဗျား ခိုင်းစေသမျှ အတိအကျ သူ သေသေဝပ်ဝပ် ဝင်ရောက် လှုပ်ရှား သွားပါလိမ့်မယ်။
လိုရင်းက – သူဟာ ခင်ဗျား မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ အရှင်သခင် လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ – သူနဲ့ ထပ်တူပြုပြီး ခင်ဗျား မောကြီးပန်းကြီး လိုက်ပါ နေရသလို၊ သူခိုင်းစေ သမျှ တစစ လိုက်လုပ် ပေးနေရတယ်။ – No-Mind ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က “သူဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အစေခံ သာ ဖြစ်တယ်- ကျွန်ထဲမှာ မှ – သန့်စင်တဲ့ ကျွန်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ မလိုရင် ဘေး ဖယ် ထားနိုင်ပြီး၊ လိုရင် လိုသလို ခေါ်ယူ သုံးနိုင် တယ်။ ခင်ဗျား အတွက် သူ့ ရဲ့ အနှောင့် အယှက်၊ မကပ်ညိနေဘူးရယ်”။ No-Mind ရဲ့ အဖြစ်ဟာ ဒါကို ဆိုလို ပါတယ်။
(If u see the word “No-Mind” in Zen Scriptures, ) that does not mean that you cannot use your mind; that isafallacy propounded by those who know nothing about No-Mind.
No-Mind does not mean that the mind is destroyed. No-Mind simply means that the mind is put aside. You can bring it into action any moment you need to communicate with the world. It will be your Servant.
April 28th 2012 at 11:40 AM